Egwuregwu mpaghara mpaghara, ngwá ọrụ nke asụsụ obodo, obere ngwá ọrụ asụsụ.
Ngwa asụsụ anyị na-asụ n'efu dị iche na ọrụ nsụgharị. Ihe ndị dị na weebụsaịtị nwere ike ibugharị. Ma URL weebụsaịtị dị na Bekee nke a na-apụghị ịgụtagharị na asụsụ ndị ọzọ. Ngwá ọrụ asụsụ anyị na-enye ngwọta zuru ụwa ọnụ maka nke a.
URL nke weebụsaịtị dị na Bekee. Ya mere, ndị na-abụghị Bekee, ndị ime obodo na mpaghara ndị mmadụ enweghị ike imepe saịtị weebụ. Ngwá ọrụ asụsụ anyị kacha mma maka ha.
1. Ndị na-asụ asụsụ mpaghara ga-enweta ibe weebụ site n'enyemaka nke onye ọ bụla mgbe naanị.
2. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere ike ịmepe weebụsaịtị na ngwá ọrụ anyị site na aka ha
3. Ha ga-ehichapụ na adreesị ụlọ ahịa Ctrl + Tinye saịtị ga-emeghe ma ọ bụ ooiiuu.com wdg. (Igodo ọ bụla 3, nri aka ekpe, ugboro abụọ, nke dị na keyboard.)
4. Gọọmenti na ndị na-elekọta weebụsaịtị ga-akpado koodu anyị na weebụsaịtị gị.
Ngwa asụsụ anyị na-arụ ọrụ dị ka ịgbaso maka weebụsaịtị.
1. Detuo ma gbanye koodu na --body-- mkpado na ebe nrụọrụ weebụ gị ma bulite
2. Mepee weebụsaịtị nke gi na ihe nyocha gi otu oge mgbe i gbasiri koodu
3. Ugbu a, pịa na plọpoi.com aha ma ọ bụ (ooiiuu na Ctrl + Tinye) wdg. Ebe nrụọrụ weebụ ga-emeghe. Lee keyboard foto
Ngwá ọrụ asụsụ anyị dị ka ịgbaso maka ndị mmadụ.
1. Ugbu a, pịa na plọpoi.com aha ma ọ bụ (ooiiuu na Ctrl + Tinye) wdg. Ebe nrụọrụ weebụ ga-emeghe. Lee keyboard foto
2. Igodo atọ ọ bụla, aka ekpe, ugboro abụọ, nke dị na keyboard